Mar dambe suurtagal maahan in hoos loo dhigo iOS 12.3 | Wararka IPhone
Ragga ka socda Cupertino ayaa hada xiray dambiga suurta galnimada ah inaad saxiixdo nooc ka hor iOS 12.4, kan oo ah kii ugu dambeeyay ee hada la heli karo ee macruufka 12. Haddii aad haysatid qalabka iOS 12.3.1 ama iOS 12.3.2 oo aad wali Miyaadan ku rakibin mid ka mid ah qalabkaaga ama aad u haysatay keyd ahaan, waad tirtiri kartaa hada.
Aniguna waxaan leeyahay hadda waad tirtiri kartaa, maxaa yeelay Haddii Apple uusan saxiixin nuqul ka mid ah macruufka ah ee aad ku rakibtay qalabkaaga, weligiis lama hawlgelin doono markaa waligaa ma awoodi doontid inaad adeegsato qalabkaaga. Sababta ay u dhaqaaqday Apple maahan mid kale oo aan ka ahayn illaalinta amniga isticmaalayaasha barnaamijkeeda.
Shirkadaha Apple waxay sii daayeen iOS 12.4 bishii Luulyo 22, iyagoo ku daray shaqooyin cusub oo aan si faahfaahsan uga hadlayno maqaal kale Isbedelka ugu muhiimsan ma ahayn bilicsanaanta, maadaama ay diiradda saartay hagaaji cilladaha amniga ee kaladuwan ee dhowaan lagu ogaaday barnaamijka 'Poject Zero' ee Google, iyo inay u oggolaatay koodh xaasidnimo in lagu dilo iPhone-ka iyada oo loo marayo ka faa'iideysiga codsiga farriimaha.
Waqtigan xaadirka ah, Apple waxay horey u sii deysay beta-kii afaraad ee iOS 13, labadaba kuwa horumariya iyo kuwa adeegsada beta-ka dadweynaha, markaa runtii waxaan dhihi karnaa taas IOS 12.4 ayaa noqon doonta casriyeyntii ugu dambeysay ee lagu helo qaabkan macruufka ah, haddii aan la ogaan cilladaha cusub ee amniga sida kuwa ku xusan sadarka hore.
Sida laga soo xigtay xogta rasmiga ah ee rasmiga ah ee korsashada macruufka, 87% qalabka la taageeray, oo la iibiyay 4tii sano ee la soo dhaafay, ayaa shaqeynaya iOS 12 mid ka mid ah noocyada kala duwan ee Apple ay ka bilowday suuqa tan iyo markii ay suuqa timid bishii Sebtember ee la soo dhaafay.
Haddii aad sugeyso dhaqdhaqaaq kasta oo la xiriira JAILBREAK iOS 12.3, hadda, wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan inaysan jirin wax ku saabsan, sidaa darteed haddii aad sugeysay inay ku sameyso qalabkaaga caadiga ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad cusboonaysiiso qalabkaaga iOS 12.4 si loo saxo cilladaha amniga ee Google laga helay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Mar dambe suurtagal maahan in hoos loo dhigo iOS 12.3
Cinwaanka ayaa khaldan, waxa aan macquul aheyn waa in hoos loo dhigo 12.3.x 12.4 waa midka hada jira
cusbooneysiiya iphone-keyga 12.4 mana heli karo wicitaano, taleefankayga waa xiran yahay.